Waan Vusi waa’ee obboloetti ishe jette - Storybooks Minnesota
Waan Vusi waa’ee obboloetti ishe jette What Vusi's sister said Lo que la hermana de Vusi dijo
Guyyaa tokko akkon Vusi waamtee akkan jetene,” Killee kana gara warra keetii gessi. Cidha obboletti keetiif kan ta’ee keekii ittin tolchani.”
Gara mana warra isaa yeroo deemuu, Vusiin namoota fuduraa guran qunnamee. Muccan tokko killee Vusi fudhate mukkati darbe cabsee.
“Male gootee,” jedhe itti iyye Vusin. “Killeewan kuni keekii tolchudhafi. Keekiin kunis immp cidha obboletti kiyyatiif. Yoo keekiin jinjiranne ta’ee obboleettin kiyya mal jetti?”
Ojoolen sunis Vusi ashuu isaanitin bayee gaddan. “Waa’ee kille caphee wanti goonu hinjiru garu sinkee obboletti keetif kuno,” jedge mucaan tokko. Vusin deemuu itti fufee.
Karra gubbati namoota lama kan mana ijaaru arge. “Mukka cimaa kana ittifayadamu dandegna,” jedhe gafate tokko. Garuu mukkicha cimaa hinturre ni caphe.
“Mal gotee?” jedge Vusiin. “Siinqeen suni obboletti kootif kenna dha. Siinqee kana namoota fudraa gurutu nakenne. Sababin isaas kille kiyya waan caphsanif. Keekiin cidhaa obboleti kiyyaf ture. Amma garu, killen hinjiruu, keekiin hinjiriuu, kennanis hinjoruu. Obboletin ko mal nanjet?”
Jarii mana ijartu killee jabsu isaantin dhifama gafatan. “Waa’ee keekii homaa gochuu hindandenyuu garu nama mana ajeru sinif kennina,” jedhe tokkon isaani. Kanafuu Vusi imala isaa ittifufee.
Otama deemaa jiru Vusin qotee bulaa tokkofi sa’a tokko qunname. Sanis akkan jedhe gafatee, “Malii qacan akkan bareedu kuni, xiqqoxiqqo nyadhuu? Garu qacan bayee mi’aawa waantef sani hunduma isaa nyatee fixxee.”
“Malgoote?” jedhe gaafate Vusiin. “Qacan suni obboletti kootif kenna ture. Qaca kana namoota mana ijaarutu nakennee sababini isaas sinqee warri fuduraa guri nakenne narra cabsan. Jarri fudura guru wan killee narra cabsaniif sinqee kana nakennani. Keekiin cidhaa obboletti kiyyaf ture. Amma garu, killen hinjiruu, keekiin hinjiriuu, kennanis hinjoruu. Obboletin ko mal nanjet?”
Sani sun sasattun turte. Sa’aati Vusi wajjiin deemte kenna ta’u dansetti. kanafu Vusin sa’ati fundhatee deeme.
Sa’atiin garuu gara yeroodhuma san gara abba issheti deebite. Vusini gara wallaale. Cidha obboletti isaatif ture.
“Malan godha?” jedhe Vusin. “Sani suni kenna bakka qaca turte nifigide deemte. Warrai mana ijaaru suni qaca nakennan, sababaa sinqee warra fudura sani cabsaniif. Warri fuduraa guru sinqee nankennan sababini isaas kille narra cabsan. keekiin suni cidhaaf ture. Amma garu, killen hinjiruu, keekiin hinjiriuu, kennanis hinjoruu.”
Obboleetin Vusi yaadde akan jette, Vusin obbolessa kiya, ani waa’ee kennaa bayee hindhphadhu. waa’ee keekiis akkanuma. Hundi kenyaa as jirraa ani bayee gammadeera. Uffataa kee bareeda uffadhuti guyyaa kana hakanjnu.” Vusinis akkasuma godhe.
Ayyaana akko wajjiin Gadoo Dammaqajelchitu Muzaa Akko